ရက်ရှောင်၍နေနည်း ဆိုတာဘာလဲ? – BurmeseHearts
အမြဲလည်း ရာဘာမသုံးချင် ၊ မည်သည့်ဆေးများ ၊ ပစ္စည်းများလည်း အသုံးမပြုလိုခြင်း ၊ သူများသိမှာ (အထူးသဖြင့် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရမှာ) ရှက်ရွံ့တတ်သော သူများဟာ အမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်သည့် ရက်များအား ရှောင်ကြဉ်၍ အတူနေထိုင်ခြင်းကို ရက်ရှောင်၍နေနည်းဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခဲထားတဲ့နို့ရည်ကို ပြန်နွေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
ကြက်ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ငုံးဥ နဲ့ ဥအမျိုးမျိုးအနက် ဘယ်ဥက အားအဖြစ်ဆုံးလဲ?